News Collection: यौनको खानी रागिनी एमएमएस
यौनको खानी रागिनी एमएमएस
कथालार्इ बिचार गर्ने हो भने चलचित्र रागिनी एमएमएस रामसे ब्रदर्सको सी-ग्रेड चलचित्रको जसतै छ। यस चलचित्र छुट्टी मनाउन गएको एक जोडीको कथामा आधारित छ। यस चलचित्रमा उक्त जोडी एक सुनसान महलमा पसगेका हुन्छन्। तर तकनिकको हिसाबले यस चलचित्रमा लिएका दृष्यहरू, यसको एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक तथा यसका पात्रहरू निकै जीवन्त देखिएका छन्।
यस भन्दा अगाडी ‘लव सेक्स और धोखा’ निर्माण गरेकी टिभीकी महारानी एकता कपूरले चलचित्रमा स्टार नभए यौनलार्इ स्टार बनाउन सकिन्छ भनेर प्रमाणित गरेकी छिन्। चलचित्र ‘रागिनी एमएमएस’ मा गरमा गरम दृष्यहरू, गाली अनी अपशब्दहरूलार्इ भरपूर प्रयोग गरेको छ।
चलचित्रमा उदय तथा छुट्टी मनाउन शहरदेखी टाढा एक महलमा पुग्दछन्। उदयले उक्त महलको चारैतीर क्यामाराहरू राखेर उनीहरूको सम्पूर्ण क्रियाकलाप खिच्ने दाँउ गरेका हुन्छन्। तर उनीहरू उक्त महलमा पुगेपछी महलमा रहेको राक्षसीले तहलका मच्चाउछिन्। तर उक्त चलचित्रमा उक्त राक्षसी को हुन? उनले के खोजेको हुन? उदय तथा रागिनीलार्इ किन दुख दिर्इन? उनीहरूको साथीहरूलार्इ किन मार्यो? रागिनीलार्इ किन मारेन? यस्ता प्रश्नहरूको सतिक उत्तर नभएबाट चलचित्र अपूरो देखिएको छ।
निर्देशक तथा पटकथा लेखकले यस चलचित्रलार्इ यी प्रश्नहरूको उत्तर बिना पनि राम्ररी प्रस्तुत गरेको छ। यस चलचित्रको पहिलो आधा भागमा यौनजनक दृष्यहरूले तथा दोस्रो आधा भागमा तर्साउने दृष्यहरूले भरेको छ।